ओलीले अमेरिका चिढयाउने र भेनेजुयला खुशी पार्ने खेल किन गरे ? Globe Nepal News Portal
जब भेनेजुयलाको सम्वन्धमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वक्तब्य जारी गरे तब नेपालमा बेला न कुवेला भेनेजुयला भन्ने लहर चल्यो । अचानक किन प्रचण्डले भेनेजुयलाको पक्षमा र अमेरिकाको विपक्षमा मत जाहेर गरे भन्ने सवाल खडा भयो । साच्चै भन्ने हो भने प्रचण्डले त्यतिवेला जारी गरेको बक्तब्य त्यतिवेला तुहियो जब सरकारले अर्को बक्तब्य जारी गरयो । यसपछि भेनेजुयला प्रकरण पनि विस्तारै सेलाउदै गयो । र,यस प्रकरणको तिन महिनापछि श्रीमती सीता दाहालको उपचारको लागि भनेर जब प्रचण्ड अमेरिका गए तब भेनेजुयला प्रकरण प्रचण्ड अमेरिका गएसंगै सकियो भनर ब्याख्या र विश्लेषण गरियो । तर,भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुरोका छोरा निकोलस अर्नेष्टो मादुरो गुयरा जब नेपाल गुपचुप आएर नेकपाका नेताहरु मध्ये कसैसंग अंकमाल गरे त कसैसंग साढे दुइ घण्टा सम्वाद गरे यसपछि भने भेनेजुयला प्रकरण हठात भएको होइन भनेर प्रष्ट भएको छ । निकै सोच विचार गरिकन गरिएको यस प्रकरण यतिवेला झन रोचक मोडमा पुगेको छ जब मादुरो पुत्र नेपालबाट सिधै उत्तर कोरिया तर्फ यात्रामा निस्किए । उनी आफनो वावुले सञ्चालन गरिरहेको सत्ताको लागि नेपालको समर्थन जुटाउन आएका थिए भने यहाबाट सोझै उत्तर कोरिया जानुले त झन नेपालको नियत के हो भन्ने सवाल खडा गरिदिएको छ । भेनेजुयलाबाट आएका मादुरो पुत्रले कि ब्राजिल कि चीनबाट उत्तर कोरिया जाने भिषा लिन सक्थे तर उनले नेपालबाट उत्तर कोरियाको लागि भिसा लिए । किन ?
नेकपाको युवा संगठनले मादुरो पुत्रलाइ नेपाल भित्रयाएको देखिन्छ । तर,किन ? के नेपाल कम्युनिष्टहरुको लागि विश्वमै आदर्शभुमि हुन थालेको हो ?
यदि यसो हो भने अमेरिकाले जसले नेपाललाइ मिलिनियम प्रोजेक्ट अन्र्तगत ५सय मिलियन डलर सहयोग गर्ने अपेक्षा नेपालले गरेको छ,उसले के नेपाललाइ सहयोग जारी राख्ला ? अमेरिका र पश्चिमाहरुले यसलाइ कुन रुपमा लिन्छन होला ? अनेक सवाल यतिबेला खडा भएको छ । तर,सरकार भने पार्टीले निमन्त्रणा गरेको भन्दै मदुरो पुत्रको भ्रमणबाट आफु टाढा हुन खोजिरहेको छ ।
यो सवाल यसकारण पनि गम्भीर हो कि हालै मात्र पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कम्युनिष्ट र समाजवादीले देश छाडे हुन्छ भनेर कडा अभिब्यक्ति दिएका छन । यस्तो बेलामा दक्षिण एशियाको एउटा देश जहा कम्युनिष्ट हब हुन थाल्यो भने यसलाइ अमेरिकाले कुन नजरले हेर्ला ?